Sikhungo amaseshini nengane kumele kube mnandi futhi ahlukahlukene, ingane ngifundile ukuba ujabule. Ngakho-ke, ku arsenal kufanele kube konke okudingayo. ibhodi Magnetic ivumela ingane ukubeka izinhlamvu ukudweba usebenzisa umaka. It kuyafaneleka ukucabangela le-accessory kabanzi.
ibhodi Magnetic ngoba ingane uvame ukwenziwa othini. Kungaba mhlophe noma lube mnyama, futhi kuye kube kuso zingathola umaka noma wokulinganisa. Ngokuvamile it has a entabeni ukuze ukubekwa obondeni noma ezinye ebusweni mpo. Kaningi ohlangothini flip ngakho ihlinzekwa futhi ezinye fun for ingane, isibonelo, ama-akhawunti. Futhi, kwezinye amamodeli, futhi kukhona eshalofini encane ukugcina zokubhala zangekhulu.
Nokho, lezi ongakhetha kuyoba ezithakazelisayo izingane ezindala, kodwa ibhodi kazibuthe ngomntwana ne izinhlamvu kungaba ezithakazelisayo ngisho ngonyaka nengxenye. Ngokuvamile kuba ngesimo ishidi sokhuni esincane nge ungqimba ezondile a ingxubevange metal, lapho upende omhlophe. Okufakwe ne-ke ungaya izinhlamvu ezincane noma izibalo nozibuthe ukuthi kungenziwa ogibele ibhodi, kodwa nanka ofanele kanye nanoma yimiphi eminye odonsa. Lokhu elimhlophe ibhodi yenzelwe izingane futhi ukudweba, okwenza sidinge umaka akhethekile ukusula sponge, nakuba kukhona onobuhle kakade ukunikela lokhu isethi. Ngalesi ithoyizi ingane ngeke ukuthuthukisa amakhono umdvwebo futhi ziqale ukucabanga ngendlela yazo esabalele, ahlahlele abuye ezizofunda izinhlamvu izibalo.
ibhodi Magnetic ngomntwana kuyadingeka futhi ngoba ingasetshenziswa isikhathi eside captivate umntwana, futhi kuyasiza kakhulu abazali, oyoba isikhathi esithile free. Ukuze ubone ukuthi ukhetho best, awukwazi kuphela uvakashele isitolo ezifanele, kodwa futhi ukubheka ngokusebenzisa Amakhasi ezitolo intanethi, lapho ezidayiswayo ngokuvamile kukhona elikhulu kakhulu. Uma kukhona ezinye ukungabaza, lapho ungabona izimpahla ezazisemizini ukusetshenziswa, okuzokwenza ugcine kancane. Ukuze uthenge ukuphuthuma akakubangeli ungabaze, kufanele uqale ukudweba, kanye nomntwana, umtshela kahle kanjani zonke lezi zinto, ngakho-ke ithoyizi kuyoba usizo ngempela.
Kukhona inketho slate ibhodi kazibuthe. It yenzelwe izinjongo ezifana nalezi ezichazwe ngezansi, Nokho ngeke ukudweba umaka nemakhilayoni. Kungaba uvinjwe ku efrijini noma ogibele odongeni, ke ingane izokwazi ngomoya ophansi ekudwebeni kashoki ibhodi, uyajabula imisebenzi yabo. Kungenzeka ukulungisa izincwadi, izibalo kanye nezinye izinto kwi odonsa, okuyinto uyophinde abe ingxenye ebalulekile ekuthuthukiseni ingane.
Njengoba ubona, ibhodi kazibuthe ngoba ingane iyithuluzi ebaluleke kakhulu ekuthuthukiseni ukuthi usengakwazi captivate, ukukhulula abazali isikhathi esithile free.
Yini igama Selfie unamathele? Izici isicelo kanye nezinzuzo
Uyini iwashi? Fashion kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube namuhla